Lesi sihloko senzelwe ukuvikela photographer kusukela amaphutha kungenzeka ekuqaleni kwenkonzo yakhe, kungakhathaliseki ukuthi ubani umfundi kulesi sihloko - photographer professional noma abukhali umthwebuli amateur. Ukwenza kube lula, isihloko sehlukaniswe iseluleko esiqondile.
UMkhandlu wokuqala. Lapho uprakthiza, ngcono.
Into yokuqala saqala kufanele ufunde photographer professional, iqiniso lokuthi ukuze bathuthukise amakhono abo - udinga ukuthatha izithombe, thatha izithombe, nokuningi isikhathi ukuthatha izithombe. Futhi-bezitshela ukuthi kungcono. Lapho photographer uzobe bekwi-practice, ngokushesha uyobe impumelelo.
Ithiphu ababili. Ukuqeqeshwa - isihluthulelo sempumelelo.
Naphezu kweqiniso lokuthi kuyadingeka ifotho eziningi, akusho ukukwenza ngaphandle kokucabanga. Kulokhu - ezithombeni ungaboni impumelelo. Ngamafuphi, uma bethwebula eziningi, khona-ke lokhu kufanele kwenziwe ngomqondo ongokoqobo - ingqondo.
Ukuthatha izithombe engqondweni yethu, professional photographer kufanele sithole izifundo enezithombe: photographer studio, photographer wedding noma umthwebuli wezithombe for yenkampani. Lokhu kuzokuvumela ukuba impumelelo eside emkhakheni esikhethiwe hhayi ukuthatha izithombe kancane.
Kuye Izikhonzi abakhethiwe enezithombe, kufanele uthole nezinto ezidingekayo wezithombe izingxenye kuso. Ngokwesibonelo, uma ufuna ukuba photographer yokubika noma umthwebuli wezithombe ku yenkampani ke udinga ikhamera bese uchungechunge rapid- beso lens zoom nokubukela engeli ebanzi, kanye on-ikhamera flash. Uma uhlela ukwenza bethwebula landscape, ilensi wokubuka engeli ebanzi uyisidingo, kanye polarizing noma isihlungi umyela.
Ithiphu ezintathu. isikhathi esingaphansi.
Vanity - isishayo, ngokuvamile ehlupheka cishe njalo photographer professional Ezifuna. Uma photographer ophithizelayo ubona uhlelo ezithakazelisayo isithombe, kuba ijubane enenjini jet odlulela yesivalo inkinobho ukukhululwa, bese zihlanganisa afterburner futhi odlula beyofuna kwelinye ipulanka kwezinhloso zenzuzo.
Futhi ukuthi into embi kakhulu entsha ophithizelayo emkhakheni izithombe ngokuphelele akanandaba mayelana ekhethwe kahle iphuzu sokudubula abeke izithombe. Umphumela - hhayi uzimele, futhi Puff. Ngakho-ke, ukuze udale eziyigugu kanye amahle izithombe, musa isikhathi.
Nokho, lisha kuyinto nasengqondweni nzima ukusebenza ngaphandle washesha. Ngingathanda ukwakha, ukudala bese udala futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nokho, bawahlanganise bese uqale ngokudubula ngenye indlela - akukho rush - ngokwanele nje. Kukhona ithuluzi imilingo kakhulu futhi ngokuyisimangaliso elikuvumela ukuba ususe rush futhi shí reflection on the speed yokushutha, beso, futhi izithombe ukuthatha.
Leli thuluzi imilingo ibizwa ngokuthi tripod. Beginner, uma kungenzeka, ngisho ukuyisebenzisa uma kwenzeka ukuthi akukhona ngokuphelele edingekayo. Lokhu kuzokuvumela ukuba ashintshe isigqi indiza ukuthatha izithombe.
Ithiphu ezine. Kopisha izithombe ubuchwepheshe.
Indlela enhle kakhulu ukuthuthukisa izithombe zakho iyithuluzi ethathwe mdwebo. Leli thuluzi ukuzama ukukopisha yomlobi. Ngiqonde, umlobi uthatha isithombe komfundi uzama ukuphinda yayo. Ngemva le nqubo ke lucwaningo ukuhlaziya - kungani kuhlukile yobuciko wobuciko. Inqubo efanayo singasebenza izithombe. ngempumelelo kakhulu.
Ithiphu Five. Ukuhlaziya - isihluthulelo sempumelelo.
Ukuhlaziywa kwe-izithombe ezithwetshulwe - impumelelo luthela photographer professional. Uma photographer professional Ezifuna silalele iseluleko wokuqala, ke ihlaziya izithombe zakho kuyoba lula kakhulu.
Modern ikhamera yedijithali, ukudala isifinyezo, kusale e imethadatha yayo lonke ulwazi mayelana izilungiselelo zekhamera ngesikhathi izithombe. Ngakho-ke, phambi kwakhe izithombe ukwazi izimfanelo izithombe isithombe ngasinye, ungakwazi isikhathi esiningi ukuhlaziywa ngempumelelo izithombe kanye bathuthukise amakhono abo.
Sethemba, lezi amathiphu kuyokusiza novice emkhakheni izithombe. Ozithobayo, photographer professional leonid Starikov.
Hustle - lokho futhi ngubani ofanele?
Nobuciko bokusina Classical abadala kanye nezingane
Kanjani ukuze ufunde ubuciko umdanso? Kanjani ukudansa umfana club?
Pistol Grand Amandla K100: imininingwane, izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Melia Varadero Marina 5 *, Cuba, Varadero: incazelo, ukubuyekezwa
Okusho Tarot Abane Pentacles kule ubudlelwane ibhalansi
Rock Club (Petersburg): umlando, imisebenzi, impilo entsha. Club "Imali Honey"